hawlaha kala duwan ee R & D oo ay ku jiraan Diyaarinta, farsamooyinka imtixaan wax soo saarka iyo heerarka wax soo saarka kiimikada. Shirkadda Our ballaaran yahay agglomeration aqoonta, farsamada, oo talanti iyo xubno kale oo cusub, oo fuliya abuurnimo sayniska iyo farsamada ee macnaha guud ee loo naaxiyo dhaqaalahooda iyo horumarinta deg deg ah ee dhaqaalaha aqoonta.
R & D Kooxaha
Shirkadda Our ayaa dhowr kooxood iskaashiga cilmi. Isla mar ahaantaana, kooxaha our ka kooban yihiin ardayda dhallinyarada phD waa kobcaya, taas oo aasaas tayo u tahay horumarka deg deg ah ee R & D dhigay. Kooxda ayaa hogaansamey fikirka ah raad ugu fiican oo aan go'aynin, ku dadaalnaa in aan macaamiisheena siino qaaliga alaabta oo tayo fiican leh.
Waxaan dajisay kaashanaya shirkadaha badan. laboratories Research iyo saldhigyadii warshadaha ayaa la aasaasay Shiinaha oo dhan, oo ay ku jiraan headquaters ee Shanghai, saldhig warshadaha ee Jiangshu, Zhejiang iyo Hubei. Waxaan awood u leeyihiin in ay soo saaraan alaabta oo tayo leh iyo sidoo kale yareeyo wasakhaynta deegaanka, khayraadka iyo isticmaalka tamarta ee wax soo saarka.